Ny Apple Watch dia manomboka mifaninana amin'ny Fitbit Versa vaovao | Avy amin'ny mac aho
Ny Apple Watch dia manomboka mifaninana amin'ny Fitbit Versa vaovao
Fitbit dia manandrana indray amin'ny modely smartwatch vaovao. Amin'ity tranga ity, ny vaovao Fitbit Versa famantaranandro manana famolavolana mitovy amin'ny Apple Watch izay tonga manitsaka mba hiezaka hanana toerana eo amin'ny tsena izay fanjanahan'ny paoma manaikitra azy.
Fitbit dia nanolotra ny Fitbit Versa vaovao, famantaranandro mifantoka amin'ny angona fahasalamana sy fahasalamana. Ny smartwatch vy maivana dia manasongadina ny fahasalamana mandroso sy ny fanatanjahan-tena toy ny Fanaraha-maso ny tahan'ny fo 24/7, ny fampihetseham-batana amin'ny efijery ary ny fanarahan-maso dingana mandeha ho azy
Ny fitaovana dia manolotra valiny haingana ihany koa ho an'ny rafitra Android, Fitbit Pay ao amin'ny kinova manokana an'ny Fitbit Versa, mozika amin'ny fitaovana sy mihoatra ny 4 andro iainana bateria. Ireo tompon'andraikitra amin'ny fanjakana Fitbit:
Rehefa mitombo hatrany ny sokajy Wearables, Fitbit Versa dia mameno ny filan'ny tsena mitsikera amin'ny alàlan'ny fanolorana smartwatch misy endrika feno endrika sy mora ampiasaina ary amin'ny vidiny mifaninana tokoa. Ny Versa dia manome ny mpanjifa fampiasa amin'ny fahasalamana sy fanatanjahan-tena mandroso, miaraka amin'ny mifanentana amin'ny sehatra finday sy ny fiainana bateria 4 andro.
Amin'izay rehetra efa noresahintsika dia mila ampiana fa Fitbit koa dia nanambara vehivavy vaovao momba ny fahasalamana hanampiana azy ireo hanaraka ny fadimbolany, hijery ny angon-drakitra momba ny fahasalamana amin'ny toerana iray, ary hahatakatra tsara kokoa ny fifandraisana amin'ny fahasalamany ankapobeny. Ho hita amin'ny fitaovana ho an'ny mpampiasa Fitbit Versa sy Fitbit Ionic ny fanaraha-maso ny fahasalaman'ny vehivavy ary koa ho an'ireo mpampiasa ny fampiharana Fitbit hatramin'ny lohataona 2018.
Ny Fitbit Versa dia hamely ny tsena miaraka amin'ny rafitra Fitbit OS 2.0, izay misy dashboard manokana izay manome fomba fiasa tsotsotra kokoa, mora volo ary holistic kokoa momba ny angon-drakitra momba ny fahasalamana sy ny fahasalamana, ao anatin'izany:
● Antontan'isa vetivety: Jereo ny statistika ara-pahasalamana sy fanatanjahan-tena isan'andro sy isan-kerinandro, hetsika ara-tantara, famintinana ny fo sy ny fanatanjahan-tena, hafatra mandrisika amin'ny hetsika, torohevitra, fika ary fitarihana isan'andro.
● Manokana azy manokana amin'ny fotoana: Fampahatsiahivana, fankalazana, fisoratana anarana, hevitra, famintinana torimaso, ary fanamby ara-tsosialy, miaraka am-bitsika handray andraikitra miorina amin'ny angon-drakitrao.
Ankoatr'izay, ny fiasa ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana ao amin'ny Fitbit Versa dia misy:
● Torolàlana fanofanana manokana: fanaraha-maso ny tahan'ny fo PurePulse 24/7, fampihetseham-batana manokana amin'ny efijery Mpanazatra ny Fitbit, 6 fampihetseham-batana 15++++++, GPS mifandraika, fanarahana milomano miaraka amin'ny fanoherana rano hatramin'ny 50 metatra, miampy ny hetsika mandeha ho azy sy ny fanarahana fanatanjahan-tena.
● Fanaraha-maso ny fahasalamana sy fahasalamana: azo ampiasaina Dingana sy fijerena torimaso hahitanao hoe tsara ny torimaso ananantsika mba hahafahantsika mametraka fandaharam-potoana fatoriana mandry fahizay. amin'ny Haavo Cardio Fitness Mandritra izany fotoana izany dia hitanao ny fomba fitovizanao.
Ny Fitbit Versa dia ho azo alahatra mialoha manomboka anio amin'ny Fitbit.com ny $ 199.95 amin'ny mainty misy fonosana alimina mainty, volondavenona misy takela-bolafotsy vita amin'ny volafotsy, na paiso misy alimo volamena vita amin'ny volamena; ny amidy dia amidy amin'ny vidiny $ 29.95 ka $ 99.95. Ny fanontana manokana an'ny Fitbit Versa, izay misy ny Fitbit Pay, dia azo vidiana amin'ny $ 229.95.
Raha mahita ny zava-drehetra noraisin'izy ireo tamin'ity smartwatch vaovao ity isika dia ho hitantsika ny fiantraikany amin'ny varotra Apple Watch ary koa ny vaovao izay hapetrak'i Apple ao amin'ny watchOS raha vantany vao naseho ny tombontsoa azo avy amin'ny Fitbit Versa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Ny Apple Watch dia manomboka mifaninana amin'ny Fitbit Versa vaovao
Fikirana ankapobeny amin'ny safidin'ny rafitra
Nilaza i Rescuecom fa ny Macs no azo antoka indrindra eny an-tsena